ChiShona mutauro unobatanidza ndimi dzakawanda dzinotaurwa muZimbabwe, Botswana neMozambique. Mitauro inobatanidzwa ichinzi ChiShona inosanganisira: Karanga, ChiManyika, Zezuru, Korekore, Ndau, Budya, ChiTonga nemimwewo.
Clement Martyn Doke (1893 - 1980) vaive mazvikokota wezvemitauro yenyika dzevatema dzemuAfrica vari mugari wenyika yeku Chamhembe kwe Afurika, nyika yeJoni. VaDoke vaive munyori mukuru wezvinyogwa zvakawanda zvinosanganisira ma Duramahwi emarudzi akawanda evatema ne Nhoroondo dzechinyakare dzemitauro yavatema vemuAfrica. Vainyora zvinyorwa zvavo zvese izvi vari mushandi weUniversity of Witwatersrand kubva mugore ra1923 kusvikira mugore ra1953. VaDoke vakava mazvikokota wemitauro yemuAfrica wokutanga kukanda pasi mavonero nenzira dzemaongororo emitauro anoenderana nemafungiro evarungu vokuEurope.
Dandira (Spider's web) chirukwa chino itwa nezvipembenene zvinonzi madandemutande.
Duramahwi (ChiKaranga) kana kuti duramazwi (ChiZezuru): Chinyogwa chinounganidza mahwi kana kuti mazwi ese emutauro weChiShona chigodudzira zvese zvinoreva ihwi/inzvi rimwe nerimwe, chichibetsera avo vanosangana nemahwi avasingazivi zvaanoreva kana manyorego awo kuti vadziidze izvi.
Humwe, gumwe kana nhimbe (hoeing bee, cooperation in field work) - Munyika yeZimbabwe mumaruva, mune tsika yakatanga kare kare iyo masahwira nemhuri dzakavakidzana dzaikokana kubetserana mabasa akaita sokurima, kushakura kana kuvaka dzimba. Basa rinoitwa nevanhu vanokokwa ava ndiro rinonzi humwe. Mazuva ano, ruzhinji mumaruva runoshandisa shoko rokuti mushandirapamwe panzvimbo yeshoko rokuti humwe. Vanhu vanozvipira kushandira humwe havatarisiri kuwana mugove kubva mubasa ravanenge vaita.
Kana munhu achinzi ane ruzivo (Knowledge in English) pamusoro pechinhu kana kuti pamusoro pemumwe munhu zvinoreva kuti ane chimwe chezvinotevera: tsananguro, humbowo, hunyanzvi, hukwanisi maererano nezviri kutaurwa zviri mudariro. Ruzivo rwunogona kuwanikwa kuburikidza nokunge munhu akazvidzidza kana kunge akamborarama mazviri.
Izwi rokuti Varungu, vazungu, makiwa kana Varumbi (Whiteman, European, Caucasian) rinoshandiswa kududza munhu ane ganda jena anobva kunyika dziri kuEurope kana ane madzitateguru akabva kudunhu iri. Varungu vanowanikwawo kuRussia inova nyika ine chimwe chikamu chiri muAsia chimwe muEurope.
Wikipedhiya, Dura reZurivo Rakasungunka.
Yunivhesiti yeZimbabwe inowanikwa muguta reHarare uye ndiyo yunivhesiti yekutanga munyika. Ine vadzidzi vanosvika zviuru gumi nerimwe uye inopa zvidzidzo pasi pemafaculty gumi: yezveKurima (Agriculture), yezveTsika (Arts), yezveMari nekutengeserana (Commerce), yezveHutano (Health Sciences), yezveDzidzo (Education), yezveHumhizha (Engineering), yezveMitemo (Law), yezveSainzi (Science), yezveMagariro (Social Studies), neyezveKurapwa kwemhuka (Veterinary Science).